Ndedzipi nzira dzekuwana maP PR maitiro anotevera backlinks kubva pamablogi?
Commentluv blog ndiyo nzira yakarurama yokuwana unhu hwepamusoro hweR PR backlinks dzinowanzosiya ma webmasters angu. Iyi nhaurirano ichagara ichipikisana kuti ikurukure. Commentluv blogs inopa zvikomborero zvevadzidzisi vewebhu pavanobatsira kusimbisa hukama hwakasimba sezvo vachikudzosera kubatana kunongotora imwe yemabhuku ako ebhurogi.
Muchikamu chino, tichakurukura dzimwe nzira dzinokosha dzingaita sei kuti PR iite zvekutevera shure kwemashoko kubva kumazwi ebhurogi.
Ngatitangei kukurukura kuti chii chinyorwa mabhuku aya uye kupi kuti uzviwanire. Aya maBloggi anokubvumira kubatanidza chimwe chemashoko ako ebhulogi uye kupfuudza majeji emuji webhuji kumapeji ako ewebhu. Vazhinji vema webmasters vanoti kudai kutevera backlink kune kukosha kwekushandura webhusaiti kupfuura yeiyo inotevera. Zvisinei, zvose zviri zviviri izvi zvine zvigaro zvekuwana magetsi. Kuti uite unhu hwehutano hwehutano hwakanaka, unoda kugadzira zvose zviri zviviri nekutevera shure. Sokutonga, hapanafollow backlinks paZV dzakakwirira zvinokonzera hutsva hutsva shure shure uye kukwidza kutenderera kune imwe website. Kana uri kuisa backlinks kumabhulogi ako kana mawebsite, unofanira kufungisisa kuti backlinks ichaitwa kuburikidza nehutano hwakarongedzwa zvakanaka sezvainovandudza kuonekwa kwebhuku rako.
Ndinoda Neil Patel pfungwa yekuvaka masangano. Akawana pfungwa yekuvaka yakabatana nenzira inotyisa. Iyi nzira inokupa mukana wekutarisa kushanda kwako uye kutora chiito chinogona kuitwa apo imwe hurongwa haisi kushanda.
Dof follow social bookmarking sites
Pamusana peGoogle maitiro ekugadzirisa maitiro ekugadzirisa, vakawanda vevhiringidzi vanofunga kuita zvisungo zvavo kanafollow kuti vaite sevanoshungurudza injini dzekutsvaga. Zvisinei, mamwe emashoko ebhuku anoramba achiripo uye anopa mawebsite webhusaiti nepamusoro-soro dofollow backlinks.
Kazhinji kutaura, kuburitsa mabhuku ndiyo nzira iri nyore yekugadzira backlinks. Iyi nzira yakarongedzwa nevemashupiti akawanda ebudiriro, uye kana ikaitwa nenzira yakarurama, inounza migumisiro yakanaka pamusoro pemotokari, nzvimbo, uye kutendeuka. Iwe unoda kutora chikwata chekugadzira sechirongwa chekuvakidzana kwehukama. Pakutanga, hazvizokupei zvipo. Zvisinei, munguva yakareba, iwe uchakwanisa kuvaka chiremera uye kuwedzerwa mutsaiti kune webhusaiti yako.
Vamwe vema bloggers vanogadzirisa nhamba yezvinyorwa zvechikamu chimwe nechimwe. Vanobvumira kusika kwekutevera kumashure kumashure chete kune vatsanangudzo vekutanga. Mutungamiri weblogi pachedu anosarudza kana kukubvumira iwe kunotevera kumashure kana kwete. Kana vakaona zviito zve spam kubva panzvimbo yako, vangangokurambidza kuisa dofollow backlinks pa blog yavo. Zvisinei, kana vakawana mazwi enyu aripo uye akakodzera munyaya inokurukurwa, ivo vachakupa iwe ne dofollow backlinks nguva dzose iwe uchitaura pane ma blogs.
Mazano ekugadzira dofollow backlinks pane Commentluv blogs
Chokutanga, edza kutarisa spammy. Kuti ugadzire mukurumbira wakanaka pane blog, unofanirwa kusiya maitiro uye mazano anobatsira. Iva nechokwadi chokuti iwe unonyatsoverenga chikamu uye unonzwisisa musoro. Kana zvisina kudaro, iwe unonyora zvinyorwa zvisinganamate kusvika pane iyo uye zvisingatarisi zvisizvo. Uyezve, usatomboedza kubudisa bhizinesi rako rekutsvaga mune zvinyorwa kune zvinyorwa zvisingabatsiri kumhizha yako. Iwe uchabviswa pane izvozvo uye usambozowana mukana wekuwana dofollow backlinks pane iyi blog. Iwe unofanirwa kuedza kuti urege kudarika nekubatanidza backlinks sezvazvinogona kutarisa zvisina kusimba uye spammy. Uyezve, ndinokukurudzira kuti usapinda rimwechete uye maviri mutsara Source .